Iskudhafka Jarmalka Adhijirka Husky: Isugeynta Qoto-Dheer ee Shebekshka Gerberian - Taranka
Iskudhafka Jarmalka Adhijirka Husky: Isugeynta Qoto-Dheer ee Shebekshka Gerberian
Indhaha buluugga ah ee buluugga ah iyo dhogorta qalafsan ee jilicsan, isku darka 'Shepherd Husky' ee Jarmalku waa nooc ka mid ah kan Adhijirka Jarmalka (GSD) iyo kan Siberia Husky .
Isku-darkaani wuxuu la socdaa naaneysyo badan, oo ay ku jiraan Gerberian Shepsky, Jarmal Husky, iyo Siberian Shepherd.
Eeyahaan nashqadeeyayaasha ah ayaa waxaa ku qulqulaya tamar waana kalgacal, feejignaan, iyo caqli badan . Waxaa intaa sii dheer, kooxdan jilicsan ayaa ku raaxeysanaya in la joogo sababtoo ah dabeecad xumadooda.
Maxaan u baran la’nahay xirmada weyn ee farxadda ee ah Husky Shepherd ?
Waa maxay asalka isku dhafka Jarmalka Shepherd Husky?
Muxuu u eg yahay isku darka adhijirka reer Jarmal ee Husky?
Miyuu kani isweydaarsigu yahay eey khatar ah?
Maxay yihiin shuruudaha waxqabadka ee loo yaqaan 'Husky-GSD crossbreed'?
Sida loo tababaro isku darka Jarmalka Shepherd Husky
Daryeelka Daryeelaha Jarmalka ee Husky Mix: waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Immisa ayey ku kacaysaa lahaanshaha isku dhafka Jarmalka Shepherd Husky?
Adhijirka reer Jarmal ee Husky miyuu isku daraa eeyga kugu habboon adiga?
Akhris Dheeraad ah: Isku darka Siberia Husky iyo isku darka Shepherd Jarmal
Noocan isweydaarsiga ahi waa isku-darka labada geesood oo koronto awood u leh oo labadaba caan ku ah iyaga daacadnimo iyo sirdoon . Isagu waa ku cusub yahay adduunka eeyaha naqshadeeye, sidaa darteed wax yar baa laga ogyahay taariikhdiisa saxda ah.
Waxa aan sameyn karno ayaa ah inaan si dhow u fiirino waalid kasta oo ku abtirsada iyo dhaxalkii ay siiyeen Jarmalkii Jarmalka ahaa.
Siberia Husky iyo asalkeeda
The Siberia Husky ayaa jirtay qarniyo badan waxaana isticmaali jiray qabiilka Chukchi ee Siberia jiidaya shandadaha iyo cawsha xoolaha . Waxay la jaanqaadi karaan cimilo qalafsan waxaana loo yaqaanaa geedo adag oo shaqeynaya.
Kuwani purebreds waxaa loo aqoonsaday iyaga adkeysi iyo xawaare waxaana markii dambe loo keenay Alaska si ay uga qayb galaan tartamada Arctic ee gobolka ka socda.
Huskies waxaa loo isticmaalay wax ka badan kaliya tartanka, sidoo kale. Admiral Byrd wuxuu Huskies u adeegsaday bartamihii-1900-meeyadii safaradiisii ​​Antarctic . Eeyadan ayaa sidoo kale ka adeegi jiray Qeybta Raadinta iyo Samatabixinta Ciidanka intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Laakiin kanaaladahan 'waxtarka ugu badan ee xusid mudan waxay noqon doonaan sameynta socod baraf badbaadin ah oo u socda Nome, Alaska si loo geeyo dawada antitoxin ee gawracatada ah.
Musher Leonhard Seppala iyo Siberia Huskies Balto iyo Togo waxay u kexeeyeen xirmo eeyo baraf ah orod 674-mayl ah - oo loogu magac daray Jinsigii weynaa ee naxariista - oo ay ku dhammeeyeen kaliya shan maalmood iyo badh.
Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) wuxuu siiyay aqoonsi rasmi ah Siberian Husky gudaha 1930 . 2018, AKC sidoo kale waxay uqeexday Huskies sida 14aad eeyaha eyda ugu caansan gudaha Mareykanka.
Adhijirka Jarmalka iyo taariikhdiisa
Fikradda taranka timo dhaadheer, timo gaaban, iyo silig lagu daboolay eyda raacaya iyo eeyaha beeraha dhashay dhaladii aan hadda u naqaanno sida Adhijirka Jarmalka .
Adhijirka ugu horreeya ee Jarmalka ayaa la siiyay magaca Horand von Grafrath waxaa qoray kabtanka ciidanka Jarmalka, Max von Stephanitz. Waxaa la aaminsanaa in dhammaan Adhijirka Jarmalka ay ka soo jeedaan Horand.
Taariikhda eeyahaas waxaa dib loo raadin karaa goor dambe 1800-naadkii , waxaana markii ugu horreysay lagu arkay Hanover sanadkii 1882, markii dambena waxaa lagu arkay magaalada Berlin sanadkii 1899.
Markay ahayd 1907, GSDs ayaa kasoo muuqday Mareykanka. Waxyar kadib, Naadiga Kennel-ka Mareykanka wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday isirkan.
Sannadkii 2018, Adhijirka Jarmalka ayaa helay Kaalinta 2aad gudaha AKC eeyaha eyda ugu caansan .
Filimada caanka ah sida Strongheart iyo Rin-Tin-Tin ayaa gacan ka gaystay kor u qaadida caan ka ahaanshaha Shepherd Jarmal. Noocani wuxuu caan ku yahay ahaansho caqli badan, lagu kalsoon yahay, oo adeecsan .
Aqoonsiga taranka ee isku-darka 'Husky-Shepherd'
Si ka duwan Siberian Husky iyo GSD, isagu hadda ma aqoonsana Naadiga Kennelka Mareykanka . Inta badan noocyada isweydaarsiga kama helaan aqoonsi rasmi ah AKC.
Isku-dhafkan ayaa ah, si kastaba ha noqotee, ay aqoonsan yihiin Naadiga Isku-dhafka ee Canine American iyo Diiwaanka Eyga ee Mareykanka Inc.
Shebekshka Gerberia waa a eey weyn leh a murqaha la dhisay .
Waxay leedahay jidh dheer oo caato ah iyo lugaha adag, oo ay weheliso dabo dheer oo hawd ah.
Astaamahani waxay ku siinayaan isweydaarsigan a muuqaal xoog leh oo xarrago leh .
Muuqaal u eg yeey, bakooradani waxay leeyihiin madax dheer oo fiiqan, san dheer, sanka madow oo madax adag, dhego kacsan, iyo aargo xoog leh.
Sida waalidkeeda Husky, Siberian Shepherd ayaa sida caadiga ah leh indho dhalaalaya oo kala geddisan, u eg yicib kuwaas oo ah bunni ama buluug.
Qaar badan oo ka mid ah isku-dhafkaas ayaa sidoo kale leh indho-midab midab leh ama midab leh.
Waxay kaloo leeyihiin a cufan, laba-lakab, jaakad aan biyuhu lahayn taasi waa jilicsan oo qalafsan tahay.
Midabbada jaakaddeeda waxay u dhexeeyaan madow, bunni madow, casaan, buluug, iyo caddaan ah, illaa bunni iyo caddaan, kareem, milix iyo basbaas, dahab, bunni khafiif ah, iyo cawl iyo bunni.
Immisa ayuu le'eg yahay Gerberian Shepsky?
Noocyada isweydaarsigaani waxay u koraan celcelis ahaan joogga 20 ilaa 25 inji (51 illaa 64 cm) , taas oo qiyaas ahaan la mid ah waalidkood saafiga ah.
Waxay sidoo kale leeyihiin miisaan celcelis ahaan u dhexeeya 45 illaa 90 rodol (20 ilaa 41 kg).
Isku darka lab adhijir Jarmal Jarmal ah ayaa badanaa ah ka weyn marka loo eego dhiggeeda dumarka ah. Ragga badanaa waxay gaaraan dhererka buuxa ee iskutallaabta iskutallaabta waxayna culeyskoodu u dhexeeyaa 50 illaa 90 rodol (23 illaa 41 kg).
Dhinaca kale, dheddigga ayaa waxyar ka fudud, culeyskiisuna yahay keliya 45 illaa 72 lbs (20 illaa 33 kg).
Miyuu kani isweydaarsaday eey khatar ah?
Taas bedelkeeda, isku dhafka GSD-Husky waxaa loo yaqaanaa a debecsan oo deggan isweydaarsi.
Waxay leedahay labada astaamood ee Shepherd Jarmal sida eey xitaa xanaaq badan iyo Siberian Husky oo ah eey qoys weyn.
Kuwa ay ilaalinta dabiiciga ah waxay ka timaaddaa abtirsiintooda GSD inta ay saaxiibtinimad u leeyihiin , gaar ahaan carruurta, wuxuu ka socdaa dhinacooda Siberia Husky.
Way ku fiican yihiin carruurta, laakiin iskudhafyadan ayaa noqon kara ka shakiyaan xayawaanka kale iyo shisheeyaha .
Waxay noqon karaan kuwo xad-dhaaf ah oo dhuleed waana soo bandhigi karaan dabeecad dagaal ah , haddii aan si habboon loo dhexgelin bulshada da'da hore.
Jarmalka Jarmal iyo ciyo
Noocyadan isweydaarsiga ah ayaa lagu yaqaan inay yihiin iibiyayaal badan oo xad dhaaf ah , mahadsanidiin jacaylka Husky ee codbixinta iyo dabeecadda dabiiciga ah ee GSD ee ciyo.
Ha la yaabin inaad maqasho Husky-Shepherd-kaaga oo isku daraya ‘kula hadalka’, adiga oo u ooyaya dareenkaaga, ama ku qaylinaya khalkhalka ugu yar ee guriga ka jira.
Kahor intaadan helin iskudhafkan, waa inaad si taxaddar leh uga fiirsataa haddii buuqu carqalad ku noqon doono deriskaaga.
Kaliya dhageyso buuqa uu Shepherian Shepherd sameyn karo:
Labadaba Adhijirka Jarmalka iyo Siberia Husky waa eeyaha tamarta sare leh. Waxaad filan kartaa isku-darka Shepherd-Husky inuu u baahan yahay dhaqdhaqaaq jireed iyo kicinta maskaxda, sidoo kale.
Sida eey aad u firfircoon, wuxuu u baahan yahay 120 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii , oo loo qaybin karo socodka saacadaha-dheer laba jeer maalintii. Isu-geyntaas waxay leeyihiin tamar ku filan oo ay ku wareegaan 11 mayl oo socod ah toddobaadle ah.
Waa inay jirtaa meel ku filan gurigaaga si eygaagu si xor ah ugu dhex wareego una sahammo. Haddii kale, eeyahaaga u kaxee park eey dhowr saacadood oo socod ah, ku warwareegaya, iyo la ciyaarida eeyo kale.
Keen, soo qabashada frisbees, iyo flyball waa waxqabadyo aad u wanaagsan oo aad ku qaban karto isku darkaaga Shepherd-Husky ee Jarmalka. Ciyaarahaan firfircoon waxay isaga siin doonaan maalin ku filan kicinta maskaxda iyo jirka .
Jimicsi maalinle ah oo kugu filan wuxuu kaa caawinayaa inaad ilaaliso dhaqanka eygaaga. Waad iska ilaalin kartaa dhibaatooyinka iman kara sida ciyi xad dhaaf ah, calalin, iyo oohin adoo eeygaaga mashquulinaya maalintii oo dhan.
Marka loo eego shuruudaha waxqabadkeeda, isweydaarsigaani ma noqon karo xayawaan ku habboon baradhada ama milkiileyaasha doonaya kaliya eey inuu la qaboojiyo.
Tani waa mid cajiib ah oo aad u tababaran Eey. Wuxuu qaadi karaa hawlo fudud casharro yar kadib wuuna adeecayaa kadib amarka koowaad ee la bixiyo.
Had iyo jeer wuxuu jecel yahay inuu barto oo uu ka farxiyo milkiilihiisa, sidaa darteed tababarku waa inuu noqdaa waayo-aragnimo waxtar leh
Bulsho-siinta ayaa loo baahan yahay in la bilaabo inta isweydaarsigan weli yar yahay. Si hagaagsan u tababbaran Adhijirkaaga Siberia waa inuu ku lug yeeshaa adkeyn, joogteyn, iyo xoojin togan si loo helo natiijooyinka ugu fiican.
Tababarka firfircoonida sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagu ilaaliyo shaxankan isweydaarsiga ah, gaar ahaan maadaama GSD uu ku fiicnaado ciyaartan.
Hawshani waxay ku lug leedahay oo ku socda koorso carqalad ah iyadoo la adeecayo amarrada gaarka ah ee uu tababaruhu bixiyo. Kartida waxaa lagu samayn karaa inta badan jardiinooyinka eyda ee bulshada ku yaal ee leh qalab si fudud loo heli karo.
Adhijirka reer Jarmal ee maxkamadeynta dhaqdhaqaaqa eeyga
Baro inaad ku dhaqanto amarrada fudud sida “Fadhiiso,” “joog,” “tag,” iyo “cirib” ka hor intaadan bilaabin eeygaaga tababarka jimicsiga. Soo qaado daaweyn fara badan si aad u dhiirigeliso eeyahaaga inta ay wax baranayaan.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah talooyinka ugu fiican ee kaa caawin kara tababarka aad u leedahay eeyaha 'Husky-GSD mix mix':
1. Bilow inaad tababarto ilmahaaga sida ugu dhaqsaha badan.
Bulsho tababarka guriga , iyo tababarka adeeca waa inay bilowdaan inta eeygaagu eey yahay.
Sidan, eeygaagu wuxuu bartaa sida saxda ah ee loola macaamilayo deegaankiisa oo uu ula dhaqmo habdhaqan habboon, oo aad labadiinaba ugu baahan doontaan nolol maalmeedkaaga.
Mid-mid-mid tababarka eey sidoo kale wuxuu xoojiyaa xiriirka ka dhexeeya adiga iyo eeygaaga.
2. Hoggaamiso oo jeclaato eeygaaga kahor intaadan bilaabin tababar kasta.
Eeyadu waa xayawaan xirxiran dabiiciyan, eeygaaguna wuxuu kaa doonayaa inaad ahaato hogaamiyaha baakadka .
Waa inaad markasta haysataa ereyga ugu dambeeya oo ardaygaagu waa inuu barto in amarradaada aan laga hor imaanaynin.
Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maaha inaad u naxariisato eeygaaga. Isku darkaaga 'Shepherd Husky German' wuxuu ubaahanyahay jacaylkaaga, daryeelkaaga, iyo kalsoonida sida ugu badan ee hogaamintaada.
3. Xoojinta wanaagsan waa in marwalba la isticmaalo.
Abaal marinta iyo amaanta ayaa ka fiican ciqaabta iyo xakamaynta eeyahaaga.
Tababaro iyo amarro la xiriir shucuur togan iyo isku darkaaga Husky-Shepherd ayaa dhaqso u baran doona dhaqanka wanaagsan.
4. Ka dhig casharadaada tababarka kuwo gaagaaban.
Eyga yar ee reer Gerberian Shepsky si fudud ayaa loo mashquulin karaa, marka waa inaad ku sii haysataa kulamada tababarka 10 ilaa 20 daqiiqo oo dheer . Kalfadhiyada gaagaaban waxay hubinayaan in eygaagu uu wali xiiseynayo barashada waxyaabo cusub.
Waxa kale oo ay fiicnaan laheyd in lagu daro a sii daayo erayga markasta oo aad tababarkaaga ku dhamaysatid si eeyahaagu u ogaado inuu u dhammaaday maalintii.
Bayaan fudud oo ah 'dhammeeyay' ayaa si wanaagsan oo qiiro leh loo yidhi waa inuu kugu filnaadaa.
5. Tababarku wuxuu ku lug leeyahay amarro gaagaaban oo cad.
Adhijirkaaga Husky wuxuu raaci doonaa amarradaada iyadoo lagu saleynayo sida uu u fasiro.
Amaradaadu waa inay ahaadaan cad oo si fudud loo fahmi karo si eeygu uusan u jahwareerin oo tababarka joogtada ahi u noqdo mid wax ku ool ah.
Ku soo noqoshada amar aasaasi ah ka dib markii eeygaagu barto waa lagama maarmaan.
6. Baro eygaaga hal xirfad markiiba.
U gudub a cashar cusub tababarkaaga kaliya marka eeygaagu uu barto casharka ama xirfadda hore.
Tani waxay ilmahaaga ka ilaalinaysaa inuu ku jahwareeriyo barashada amarrada badan hal mar.
7. Daawooyinka iyo xirashada waa in si fudeed ah loo isticmaalo.
Yaree isticmaalka daaweynta sababtoo ah daaweyn badan ayaa ka dhigi doonta eygaaga miisaan culus , iyo waxtarka daaweynta inta lagu jiro tababarka waa la dhimay.
Tababbarka leashku wuu fiican yahay, laakiin uma baahnid inaad isticmaasho gaar ahaan marka eeygaagu uusan khatar u ahayn dadka kale.
Waxaad rabtaa eygaagu inuu kuu hogaansamo isaga ikhtiyaar ikhtiyaar ah , maaha sababtoo ah wuxuu dareemayaa hanjabaad ama xadidan xadhigga.
8. Raadso caawimaad xirfad leh markaad u baahato.
Marka eey aad leedahay ay ka muuqato astaamo gardaro ama haduu yahay madax adag inkasta oo casharradaada soo noqnoqda, tixgeli inaad raadsato caawimaad tababaraha xirfadeed.
Tababaraha xirfadlaha ah ayaa ogaan doona waxa la sameeyo si loo ilaaliyo dabeecaddaada foosha xun.
Ka digtoonow: Jarmalka Jarmalka wuxuu u baahan yahay wax yar ka badan TLC ka badan noocyada isweydaarsiga.
Si kastaba ha noqotee, waxaad ogaan doontaa in dadaalkaagu u qalmi doono wehelnimada iyo daacadnimada eeygan ku siin karo.
Immisa ayey tahay inuu eey cuno?
Waxay u baahan yihiin ugu yaraan 3 koob oo ah cuntada eyga maalintii , oo loo qaybiyay laba jeer. Waxaa ugu wanaagsan in la aado kibble tayo sare leh oo leh waxyaabo borotiin ku badan.
Waxay sidoo kale u baahan yihiin ugu yaraan 25% borotiin marka aad ku jirto cuntada hadhuudhka ah iyo 30% borotiin qorshe cunno aan hadhuudh lahayn.
Eygaaga ayaa ka faa'iidi doona isku-darka isku-darka , taas oo dhiiri gelin doonta koritaanka carjawda waxayna gacan ka geysan doontaa hagaajinta dhaqdhaqaaqa. Tani waxay si gaar ah waxtar ugu yeelan kartaa eyga aadka u firfircoon sida iskutallaabta Shepherd-Husky.
Midhaha sida tufaaxa, buluugga, liinta, qumbaha, baaraha, qaraha, iyo cananaaska ayaa lagu dari karaa cuntadaada Gerberian Shepsky, laakiin kuwan cuntooyinka waa in lagu siiyaa gudaha qaddarka la xakameeyo .
Maxay tahay in aanad quudin Gerberian Shepsky-gaaga
Eeydu waxay ku leeyihiin fiitamiin C ku filan beerkooda, marka looma baahna in eeygaaga wax la siiyo Cunnooyinka fiitamiin C-ga ah .
Waa inaadan quudin eeygaaga badarka iyo cuntada fiber-ka hodanka ku ah sidoo kale maadaama kuwani aan lagu burburin karin nidaamkooda.
Basasha, shukulaatada, jalaatada, ama lafaha ham waa inaan la siinin eeyadan sidoo kale maadaama cuntooyinkani ay wax u dhimayaan shaqadooda jir ahaaneed.
Iyo, iyadoon loo eegin sida aad u garaacayso Jarmalkaaga Jarmalka, iska ilaali inaad siiso cunto fudud oo cusbo leh sida salool ama jajab baradho ah .
Cunitaanka cusbada ee xad dhaafka ah waxay sababi kartaa shuban, matag, iyo qalal eeygaaga.
Arooska isku darka adhijirka reer Jarmal ee Husky
Isku darka 'Shepherd Husky' ee Jarmalka ayaa leh jaakad laba jibbaaran , oo ay ka dhaxashay labada Siberia Husky iyo German Shepherd.
Jaakadani quruxda badan waxay u baahan tahay dayactir joogto ah gaar ahaan maadaama uu yahay a daadinta culus .
Cadayashada laba ilaa saddex jeer usbuucii waxay ilmahaaga u ilaalin doontaa jaakad dhalaalaysa, jilicsan, oo ka madax bannaan dhaldhalaalka. Cadayga joogtada ahi wuxuu kaloo ka caawiyaa sii wadida daadinta daaqada waxayna ka saaraysaa timaha dhintay jaakada.
Waqtiga xagaaga waa markii Husky Shepherds ay daadiyaan kuwa ugu badan. Cadayashada maalinlaha ah waa inaad sameysaa khiyaamada, inkasta oo aad diyaar u tahay inaad sameyso qaybtaada saxda ah ee faakiyuumka markey habeynta dhammeyso.
Noocyadan isweydaarsiga ah ayaa si aad ah ugu raaxeysta biyaha sidaa darteed qubaysku ma noqon karo dhibaato. Maydho eygaaga kaliya markay lagama maarmaan tahay sidaa darteed lagaagama saari doono saliidaha dabiiciga ah ee jaakadiisa.
Kormeerka dhagaha iyo nadiifinta waa in la sameeyaa toddobaadkii hal mar . Isticmaal maro qoyan si aad uga saarto dhegaha canine-gaaga ee ku soo kordha cufka culus. Indhihiisa sidoo kale waa in la baaraa . Haddii ay jiraan wax qoryo ah oo ku yaal geesaha indhaha eeygaaga, la tasho dhakhtarkaaga isla markiiba.
Ciddiyaha waa inay ahaadaan la googooyay bishiiba mar si looga fogaado cunuggaaga xanuun daran. Cidiyahaaga saxarkaaga ha ku goynin qurxiyo xirfadle ah haddii aadan ku qanacsanayn inaad adigu sameyso.
Caday ilkaha eygaaga hal mar maalintii . Iska ilaali astaamaha huurada dhisitaanka. Lafaha, Kibbilada qalalan, iyo calalinta alaabta carruurtu ku ciyaaraan ayaa sidoo kale kaa caawin doona sidii loo ilaalin lahaa ilkaha ilmahaaga.
Arrimaha caafimaadka ee Adhijirka Siberia
Noocyada 'Crossbreeds' ayaa la sheegay inay ka caafimaad badan yihiin noocyada sarsare. Si kastaba ha noqotee, isku darka 'Shepherd Husky' ee Jarmalka ayaa laga yaabaa inay u nugul yihiin qaar xaalado caafimaad oo la taaban karo inay ka dhaxasho waalidkeed.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah kuwa ugu badan arrimaha caafimaadka guud in isku-dhafkan laga yaabo inuu ku dhaco:
Xusulka iyo sinta dysplasia - Tani waxay dhacdaa marka kala-goysyadu noqdaan kuwo aan degganayn ama kala daadanaya. Tan waxaa looga hortegi karaa adiga oo ku ilaaliya Gerberian Shepsky miisaankaaga caafimaad si aan culeys saa'id ah loo saarin kala-goysyadiisa.
Cudurka 'Corneal dystrophy' - Tani waa xaalad ay waxyaabo aan caadi ahayn ku ururaan lakabka kore ee isha ama kiliyaha. Si tartiib tartiib ah ayuu u kobcayaa wuxuuna saameeyaa labada indhood wuxuuna sababi karaa aragti la'aan.
Atrophy-ka aragga indhaha ee horumarka leh - Tani dhibaatada indhaha waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo nolosha dambe eeygaaga waxayna u horseedi kartaa indho la'aan qayb ahaan ama wadarta ah. Calaamadaha hore qaarkood waxaa ka mid ah indho la'aanta habeenkii, awood la'aanta in wax lagu arko iftiinka dhalaalaya, iyo ardayda la ballaariyey.
Indha-beelka carruurta - Cudurkan ma bilaaban karo ilaa eygu lix jirsado. Muraayadaha indhaha ayaa noqda kuwo madmadow leh waxayna sababaan waxyeello yar oo xagga aragga ah wadar ahaan indho la'aanta xaaladaha degdegga ah.
Xaaladaha kale ee caafimaad ee Jarmalku Husky u nugul yahay in lagu daro cilado dhiig , buro, iyo suuxdin
Mudo intee le'eg ayuu noolaan noocan ahi?
Isku darkaaga Shepherd Husky Jarmal wuxuu leeyahay celcelis noloshiisa 10 ilaa 13 sano . Wuu sii noolaan karaa intaas intaas ka badan, iyadoo kuxiran arrimo sida cunnadiisa, caafimaadkiisa, hidde-ahaantiisa, iyo heerka jimicsigiisa.
Had iyo jeer digtoonow mid kasta calaamadaha cudurka eeygaaga. Ha ka waaban inaad la tashato dhakhtarkaaga xoolaha markii aad ku aragto isbeddelo lama filaan ah oo ku dhaca jirkaaga ama dhaqankaaga Husky-Shepherd.
Waxay kuxirantahay meesha aad ku nooshahay, kharashyada bilowga ah sida qalabyada, habraacyada caafimaadka sida talaalada iyo soosaarida ayaa noqon kara $ 415 ilaa $ 500 .
Kharashyada caafimaad ee sanadlaha ah sida baaritaannada udhaxeeya $ 485 ilaa $ 600 .
Dhinaca kale, kharashyada aan caafimaadka ahayn ee sanadlaha ah sida tababarka, cuntada, iyo adeegyada qurxinta xirfadeed, ayaa laga yaabaa inay ku kacaan $ 1100 .
A Shepherd Husky mix a puppy puppy ags agariiste $ 350 ilaa $ 850 , celcelis ahaan.
Waad eegi kartaa Siberia Husky iyo Kalkaaliyeyaasha Jarmalka Shepherd wixii macluumaad ah ee ku saabsan halka laga iibsado noocyada eyda:
Hollow Hills Adhijirro Jarmal ah (Pennsylvania)
Amberg Shepherds House (Kaliforniya iyo Virginia)
Dhinaca kale, waxaa sidoo kale jira degellada korsashada inaad soo booqato haddii ay dhacdo inaad xiiseyneyso inaad korsato Ey yar oo GSD-Husky ah. Baadhid Samatabbixinta Arctic (Utah), Guriga Husky (New Jersey), ama Samatabbixinta Adhijirka Jarmalka ee Westside (Los Angeles) wixii macluumaad ah ee ku saabsan korsashada
Haddii aad raadineysid eey saaxiibtinimo leh, eey tamar-sare leh si aad u noqoto saaxiibkaaga daacada ah ee aamin sanadaha soo socda, markaa Gerberian Shepsky shaki la'aan waa kuu habboon yahay adiga.
Shebekadaha Gerberiya waa asxaab daacad ah oo jacayl leh . Waxay yihiin qaar ka mid ah eeyaha ugu fiican ee ilaaliya hareeraha, caqligooduna wuxuu u sahlaa tababarka.
Si kastaba ha noqotee, jaangooyooyinkan ayaa u baahan jimicsi badan lagamana yaabo inay ku habboon tahay dadka leh qaab nololeed deggan. Waxay sidoo kale daadiyaan si aad ah waxayna u baahan yihiin in loo hagaajiyo maalin kasta.
Miyaad u malaynaysaa in eeyani mudan tahay dadaalka? Faallo hoos ka bixi haddii aad khibrado kala soo kulantay Gerberian Shepsky.
Isku-darka Corgi Husky
Isku darka 'Shepherd' Golden Retriever mix
Xaqiiqooyinka aad u baahan tahay inaad ka ogaato eyga Feist
Maxay Eydu Daacad u Yihiin? Sharaxa cilmiga
Waa maxay rajada nolosha ee isku darka chihuahua terrier
pugs madow vs fawn pugs
intee le'eg yahay pomchi-ga
meeqa waa pitbull sanka buluuga ah
Shaybaarka madow iyo adhijirka jarmalka ayaa isku daraya eeyaha